I-Biografi kunye neencwadi eziphambili zeAlmudena Grandes | Uncwadi lwangoku
UAlberto Legs | | Ababhali, Inoveli
Kucingwa njengenye ye ababhali abakhulu belizwe lethu, UAlmudena Grandes ubuxabise ubugcisa obenziwe ngamabali aqulathe ezinye zezona zigxeko zibalulekileyo kunye neempawu ezizezona ziyinyani zaseSpain kumashumi eminyaka akutshanje. Siphinda siqwalasele i-biography kunye neencwadi eziphambili zeAlmudena Grandes ukuze ufumane (okanye ufumane kwakhona) ubomi bakhe nomsebenzi.
1 Ngcaciso emfutshane nge-Almudena Grandes
2 Iincwadi ezigqwesileyo nguAlmudena Grandes
2.1 Iminyaka kaLulu
2.2 I-Malena ligama le-tango
2.3 IAtlas yeJografi yoLuntu
2.4 Intliziyo efriziwe
2.5 Agnes kunye novuyo
Ngcaciso emfutshane nge-Almudena Grandes
Ukufota: ICastilla la Mancha Library
Ukususela ebutsheni, uAlmudena Grandes (eMadrid, ngoMeyi 7, 1960) wayesazi ukuba ufuna ukuba ngumbhali, ngakumbi kwikhaya apho umama wakhe kunye noninakhulu babekhuthaza imibongo kunye nemibala enemibala eyayihlala isetafileni yabantwana. endaweni yokuzoba, ubugcisa obaGrandes ababanga ukuba akazange abenabo. Nangona kunjalo, iindibano zoluntu, ngakumbi umama wakhe anyanzelisa ukuba afunde "isidanga sentombazana," zamkhokelela Ngena kwiFakhalthi yeJografi kunye neMbali yeYunivesithi yaseComplutense yaseMadrid, nangona wayoyame ngakumbi ngesiLatin.
Emva kokuthweswa isidanga, waqala ukusebenza ebhala amazwibela kunye nemibhalo yee-encyclopedia ukongeza kwindima yeefilimu. Ekugqibeleni, Ngo-1989 wayeza kupapasha iThe Ages of Lulu, Inoveli yokwaluka epapashwe ziiNdawo eziHlelayo kunye nomphumeleleyo we Ibhaso lokuNcuma okumi nkqo ngokuBalisa ngokuBhala. Impumelelo iguqulelwe kwiilwimi ezingama-21 kwaye kufikelelwe kuzo Ukuthengisa iikopi ezingaphezu kwesigidi, ngakumbi emva kokulungiswa kwefilimu yeBigas Lunas eyakhutshwa ngo-1990.
Ngo-1991, uGrandes wapapasha inoveli yakhe yesibini, Ndizokufowunela ngolwesiHlanu, impumelelo encinci, ngelixa ngo-1994 omnye weyona misebenzi iphumeleleyo wabona ukukhanya, I-Malena ligama le-tango, inoveli ebalisa ixesha lokufikisa nelokukhula kwebhinqa eliselula eliphuma koohlohlesakhe abaphezulu embindini wexesha loTshintsho neliza kwenziwa libe yifilimu ngo-1996. Ngale noveli, wayeza kuqala adume kakubi. ukubaluleka kwenyani yaseSpain kule minyaka ingama-25 idlulileyo yenkulungwane yama-XNUMX kunye nokubaluleka kwabasetyhini njengabadlali abaphambili bomsebenzi wakhe. Isibonelelo sikhona nakwamanye amabali akhe anje nge IAtlas yeJografi yoLuntu, egxile kokungalunganga kweqela labasetyhini abane abamele uloyiko kunye namathandabuzo otshintsho kwisizukulwana.
Umsebenzi kaGrandes uvele ngamanyathelo amakhulu kule minyaka ilandelayo, ukuba Intliziyo efriziwe, epapashwe ngo-2007, inoveli yakhe ebiza kakhulu. Ugxile kwixesha lasemva kwemfazwe, incwadi yaqinisekisa umdla wombhali wokuba ngumbalisi wembali yakutshanje yaseSpain, ukusuka kwiMfazwe yamakhaya ukuya kwingxaki yezoqoqosho. Eyokugqibela yayingumxholo awayethetha nawo Ukwanga ngesonka, ngo-2015, inoveli epapashwe phantsi kwenjongo yombhali ukungqinisisa isimo sabantu abadala bethu, nesabantu abahlala ngesidima nangona iimeko zinje.
Umsebenzi wakhe wamva nje, Izigulana zikaGqirha García, UBig uyaqhubeka nothotho Iziqendu zemfazwe engapheliyo eyaqala ngo-2010 kwaye yaphumelela ibhaso lika-Elena Poniatowska eMexico.
Ukongeza ekubeni ngumbhali wenoveli, ooGrandes Uthatha inxaxheba kwiinkqubo zeCadena SER kwaye uhlala enegalelo kuEl País, ukongeza ekubeni ungoyena mntu waba nelizwi elinempembelelo ngokubhekisele kubume bezopolitiko, ngakumbi ngexesha leyona minyaka ibinzima kwilizwe lethu.
Ngale ndlela, kwaye xa ujonga ngasemva, iAlmudena Grandes ayihlanganiswanga nje njengenye ye ababalisi abakhulu bexesha lethu, kodwa njengelizwi eliyimfuneko xa kufikwa ekujongeni izinto ezininzi zembali yethu yakutshanje.
Iincwadi ezigqwesileyo nguAlmudena Grandes
Ipapashwe ngo-1989, Iminyaka kaLulu Yayiyincwadi yokuqala epapashiweyo kaGrandes kunye nokuqaqambisa umsebenzi wakhe weemeteor. Ibali lokufunda elilandela ekhondweni lika ULulu, intombazana eneminyaka elishumi elinesihlanu eyondla iminqweno enesidima eyondliwe ngumthandi kwaye loo nto imguqula ibe ngumfazi othi, sele sele emdala, azibhaptize kuzo zonke iintlobo zeminqweno eyingozi yesondo. Umsebenzi ibingu ophumelele ibhaso le-La Sonrisa nkqo ye-Erotic Narrative kwaye wahlengahlengisa kwi-cinema ngo-1990 ngu-Bigas Luna noFrancesca Neri noJavier Bardem kwindima isihloko.
I-Malena ligama le-tango
Inoveli edibanisa umsebenzi weGrandes yapapashwa ngo-1994 kwaye yaqhelaniswa ne-cinema kwiminyaka emibini kamva kunye no-Ariadna Gil kwindima ephambili. IX-reyi yoohlohlesakhe baseMadrid ngamehlo UMalena, intombazana eneminyaka elishumi elinambini izama ukufumana indawo yayo emhlabeni ngokuzithelekisa newele lakhe, uReina. I-labyrinth yeemfihlo zosapho eziya kuthi zombini zizame ukufumanisa kumashumi amathathu eminyaka efikelela kuTshintsho lwaseSpain oluya kutshintsha yonke into ngonaphakade. Enye ye Ezona ncwadi zibalaseleyo zika-Almudena Grandes, ngokuqinisekileyo.
Ngaba ungathanda ukufunda I-Malena ligama le-tango?
IAtlas yeJografi yoLuntu
Ubukho babasetyhini kwibhayibhile kaGrandes kufikelela kuvuthondaba kulo msebenzi opapashwe ngo-1998 noqala kwiSebe lezeMisebenzi lendlu yokupapasha. Kuya kuba lapha, ngexesha lokwandiswa kwe-atlas yi-fascicles, nini Abafazi abane, uAna, uRosa, uMaría noFran baya kuqonda ubukhoboka babo kwimithetho yelinye ixesha kunye nokungakwazi kwabo ukwakha umhlaba, okanye iiatlasi zakho, kuxhomekeke kwiminqweno yakho yangoku. Uhambo olugqibeleleyo loloyiko kunye neminqweno yesizukulwana esisemva kwexesha, umsebenzi yahlengahlengiswa kwi-cinema ngo-2007 ngeCuca Escribano, Montse Germán, María Bouzas kunye noRosa Vila njengabafazi abane abakhokelayo.
Awukafundanga IAtlas yeJografi yoLuntu?
Amaphepha angama-919 alo msebenzi apapashwa ngo-2007 aqinisekisa umceli-mngeni u-Grandes awazibekela wona wokwakha eyona ncwadi yakhe inomdla. Uphengululo lwe uloyiko kunye neemfihlo zemfazwe yamakhaya Esikwaziyo ngabalinganiswa baka-Álvaro, utata wakhe othathe inxaxheba emfazweni, kunye noRaquel, umzukulwana wendoda efudukayo ebuyela eMadrid phantsi kweemeko ezingaqhelekanga. Umsebenzi onokuphela okungalindelekanga okuncoma iprosesa ngooGrandes ukuba ibe namandla njengoko intle.
Ngaba ungathanda ukufunda Intliziyo efriziwe?
Agnes kunye novuyo
Ufakelo lokuqala lwefayile ye- saga Iziqendu zemfazwe engapheliyo, equlathe izihloko ezine ukuza kuthi ga ngoku, Agnes kunye novuyo Yapapashwa ngo-2010 ifikelela kwimpumelelo ebalulekileyo kunye noluntu. Umsebenzi obonisa owona mnqweno mkhulu ka-Grandes wokuzisa awona mabali abambekayo kunye amnyama emfazwe enkulu yaseSpain yekhulu lama-1989. Umdlalo ubekwe ehlotyeni lowe-XNUMX apho iqela lamaKomanisi aseSpain ligqibe kwelokuba lenze isicwangciso esinqwenelekayo sokulawula iSpain esiphawulwe yimfazwe kwaye umnqweno wokuba nesibindi kuka-Inés omncinci wajika waba ngumphambili ophambili.
Ucinga ntoni nge i-biografi kunye nemisebenzi emihle yeAlmudena Grandes?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli » I-Biography kunye neencwadi eziphambili zeAlmudena Grandes